4 Kunyengetedza Dhidhiyo Dhidhiyo Tactics Kuti Usimudzire Kushanda Kwako - Semalt Expert Concerns
A5E00143293 SIEMENS.jpg" border="0" width="100%" style="margin-bottom:35px; margin-top:10px" align="absmiddle">
Kudhinda kweDhidhiyo kunosanganisira kutengeserana kwemeyili, SEO, kuparadzirwa kwepaIndaneti, zvekugarisana nevamweuye webhutani yakagadzirwa. Izvi zvinopa dambudziko kumadzimai emabhizimisi emunharaunda avo vanongoda kutora maziso akawanda kune nzvimbo dzavo. Kazhinji, izvivashandi vezvemabhizimisi vakabatikana zvikuru vachitsvakurudza pamusana pekutengeserana kwepamusoro kwemabhizimisi avo.
Panyaya iyi, Nik Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira Semalt ,inotsanangura nzira dzinokosha dzekutsvaga dzekutengeserana iyo chero bhizinesi ripi rinogona kugamuchira muna 2017. Vashandi vomunharaunda vemunzvimbo dzakadai sevatongi, vanachiremba meno,vanachiremba, uye vaparidzi vachawana mazano aya anobatsira zvikuru.
1. Yeuka mupfungwa, nzvimbo yako yekutendeuka "mustang".
Zvikamu zvose zvekutengeserana kwema digital zvinofanira kutengesa SEO internet traffic kunebusiness website. Izvi zvinofanira kuonekwa sekukosha zvikuru. Nzvimbo dzakawanda dzewebhu dzakasikwa nehutachiona husingafariri hunoreva kuti ivokuedza kufamba nemichina yakadai sefoni uye kutarisa kusingazivikanwi. Kutsvakurudza kunoratidza kuti kupfuura 43% yevatengesi vemotokari inotanga kubva kune fonizvishandiso zvine chimiro chinotarisirwa kuwedzera. Nokudaro, nzvimbo yebhizimisi inofanirwa kuve inofadza nekufamba nyore nyore pane zvigadzirwa zvemagetsi. Vashanyirinofanira kukwanisa kuvhara pa kero ye email kana nhamba yefoni kuti utaure nemuridzi webhizimisi kana vatungamiri. Uyezve, kana vatengi vanekuti anyore pasi kuonana, zvino kambani inogona kunge ichirasikirwa navo kumakwikwi nenzvimbo dzakashambadzirwa zvakanaka. Saka, pfungwa,ndekushandura vaenzi kuti vadye email, foni kana kufamba-in.
2. Ita "mhinduro dzakapfuma" pawebsite.
Vanhu vari kuchinja iye zvino kushandisa Google. Vashanyi havachadi kuverengatarisa kuti uwane ruzivo asi unosarudza Google kupindura mibvunzo yavo. Sekambani, Google yakaisa mari mukana uyu nekuisa"mhinduro dzakapfuma" kumatsotsi aro ekutsvakurudza uye kuvandudza maitiro eSOO. Izvi zvinopa mhinduro yakarurama. Panyaya iyi, chero bhizimusi rekunomuridzi ane mibvunzo inowanzovanzwa kubva kune vatengi. Nokudaro, zvingava zvakanakisisa kupindura mhinduro dzakapfuma pane webhusaiti yebhizimisizvakadai zvokuti dzinotanga kuonekwa apo Google inobvunzwa mibvunzo.
3. Shandisa zvemagariro evanhu nokungwarira.
Sezviri pachena, mabhizinesi akawanda emunharaunda anowirirana paanosarudza pamagariro evanhukushandiswa uye kuti kutumira kunofanira kuitwa sei. Murairo unokosha ndewokuziva vatengi vako. Zvemagariro evanhu hazvisi pfungwa itsva. Kutambavatengi vako, kutanga nevamwe vadzidzisi vezvemagariro evanhu. Uyezve, kuisa kune zvigadzirwa zvemashoko evanhu zviri kungogadzira izwi rebhizimisiKuwedzera pakukurukurirana nevatengi vakavimbika. Nokudaro, mutengesi anofanirwa kuchenjerera kuti arege kuwedzera kuwandisa nzvimbo yacho nekutengeswa uye zvipfeko.
4. Ramba uchifunga nezvekutengeserana kwemeyili.
Mamwe makore shure, kutengeserana kwemaimeri kwakaiswa parutivi kuti kuve nenzira yekushamwaridzanakushambadzira nhau. Zvisinei, kune mamwe mabhizinesi emunharaunda, email yekutengesa inzira inotsika uye yakakura yokukurukura nevatengi. Instagramuye Facebook kuratidzwa kwemashoko kune chikamu chiduku chevateveri. Vanoda mumwe kubhadhara kusvika kune vanhu vakawanda. An entrepreneur anogona kutumira zvinhu zvitsva zvezvinhu,ruzivo ruzivo uye mahwanda pasina mari kuburikidza nekushandisa email. Kushandisa MailChimp kunobvumira bhizimisi kutumira mameseji kune 2,000 mahofisi ayo ariiyo inobudirira yokudhinda nzvimbo.
Mukupedzisa, vagari vemabhizimisi vemo vanofanira kugara vachitarisa bhizinesi ravomawebhusayithi kuitira kuti mashoko ehungano echokwadi ave kushanda. Dzimwe nzira dzekutengesa dzekudhijita dzinogona kushandiswa kutevedza kufamba kunesite.
4 Kunyengetedza Dhidhiyo Dhidhiyo Tactics Kuti Usimudzire Kushanda Kwako - Sealt Expert Concerns